ဒီ လို လေး တွေး ကြည့် မယ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Drama, Essays.. » ဒီ လို လေး တွေး ကြည့် မယ်
ဒီ လို လေး တွေး ကြည့် မယ်
Posted by မင်း ခန့် ကျော် on Nov 13, 2013 in Drama, Essays.. | 20 comments
အခုလက်ရှိ ကျတော်တို့ နိုင်ငံရဲ့ ချမ်းသာကြွယ်ဝမူ့
အဆင့်ဟာ ကမ္ဘာ့ အဆင့် ဘယ်လောက်မှာရှိနေ
သလဲ? သေချာတာကတော့ အဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံများ
မယ်။ စီးပွားရေးတိုးတတ်မူ့ညွှန်းကိန်းတွေ အစိုးရ ရဲ့
ရ ရန် ရှိ ပေး ရန် ရှိ တွေ။တဦးချင်းစီရဲ့ ဝင်ငွေ တွေ
ငွေကြေးတန်ဖိုးတွေ တိုင်းပြည်ရဲ့ အရင်းအမြစ် သယံဇာတ
တွေပြုန်းတီးလာမူ့တွေ စတာ စတာ တွေကိုသုံးသပ်
ကြည့်ရင် တော်တော်ကို စိတ်ပျက်စရာ သိမ်ငယ်စရာ
နဲ့ယှဉ်ရင် ပြည်သူတွေရော အစိုးရပါ အင်မတန် ဆင်းရဲ
နုံချာ လှပါတယ်။ခင်ဗျားတို့လဲ ကျတော်ထက်ကိုပိုသိလို့
ကျတော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ အခြေအနေဆိုးကို ကျတော့်ထက်တောင်
ပိုသိ ပိုမြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ တိုင်းပြည်စနစ်တကျနဲ့တိုးတတ်
စည်ပင် လာအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်တောင် နှစ်သုံးဆယ်
မက အချိန်ယူရမယ် လို့တောင်ကျတော်ထင်ပါတယ်။ဒါတောင်
ရှိပြန်ရော။ လူပြိန်းတွေး တွေးသည်ဆိုလည်း ကျတော်
ကျေကျေ နပ်နပ် လက်ခံနိုင်ပါတယ်။စိတ်ဓါတ်လေးတွေမြှင့်
ကျတော်တို့နိုင်ငံသည် အရှေ့တောင်အာရှတွင် ဒုတိယ
တရုပ် နှင် အန္ဒိယ အကြားရှိသည်။ ဒီလောက်နဲ့ပဲ
တာပါ။ ဒါနဲ့မှလက်မခံနိုင်သေးရင် မြန်မာနဲ့ဂျပန်ကို
လဲမယ်ဆိုပြီးကမ်းလှမ်းကြည့်မယ်ဗျာ။ဂျပန် သန်း ၁၂၀
ကလူချဉ်းပဲ မြန်မာကိုလာနေ။ ပိုင်တာအကုန်ထားခဲ့။
ရရန် ပေးရန် တွေပါထားခဲ့။ မြန်မာ သန်း ၆၀ ဂျပန်
ဓနဉ္စာတွေ ကြွေးမြီးတွေ ထားခဲ့။ အဲသလို လှဲကြည့် ဖို့
ဂျပန်ကိုကမ်းလှမ်းကြည့်ပါလား။ ကျတော်တော့ မြန်မာဘက်
ကရှုံးမယ် နာမယ်ထင်တာပဲ။ တောင်ကိုးရီးယားကိုတောင်
ဒါကြောင့်မြန်မာဟာ ကမ္ဘာမှာဘာလဲ ဘယ်အဆင့်လဲ ပေါ့သေးသေး
တော့မဟုတ်ဘူးနော်။ ဒီ သန်း ၆၀ တွေ ညံလို့ အာပဲများနေလို့
“မီးအားမှန်မှန် နှင့် တယူနစ် တကျပ် ခေတ်ကို မျော်နေသည်။”
မလွယ်လောက်ဖူး Khant Khant ရေ
မီတာခကတော့အခုအစိုးရတောင်းတဲ့ပိုက်ဆံပေးလိုက်တာမှသက်သာအုံးမယ်ထင်ဘာ့။ ဓါတ်ဆီလို ဈေးတက်မယ်ဆိုတုန်းက အခုလိုပဲကန့်ကြကွက်ကြ။ အစိုးရကလဲ စမတ်ကဒ်တွေလုပ် ခက်အောင်လုပ် ပြန်ကျစ် လူထုက ဆီတန်းစီရတဲ့ ဒုတ်ခမခံနိုင်တော့အော်။ အဲမှာ အစိုးရကသူဆင်တဲ့ဂွင် ထဲဂွပ်ကနဲ့ဝင်။ နင်တို့ဒုတ်ခရောက်တယ် ငါတို့လဲအရှုံးမခံနိုင်ဘူး အိုက်ဒေါ့ ခရိုနီတွေလက်ထဲအပ်ဆိုတော့ ဆီတော့ပေါလာပါရဲ့ အခုတဂါလံ ၄၀၀၀ နဲ့ဝယ်နေရသမို့လား။ ဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘူးလေ။ စမိတဲ့ဇာတ် ဆုံးအောင်ကရတော့မပေါ့။ အခုမီတာခလဲ ဒလိုဂွင်ဆင်ပြီး ခရိုနီတွေလက်ထဲသူတို့မဆင်းခင် အပ်လိုက်ရင် ပိုကိုယ်ကျိုးနဲတော့မယ်ထင့်။
စကားပုံရှိတယ် “ရင်လောက်မှန်းမှ ဒူးလောက်ကျတယ်”
မီတာခကိုတော့ “ခြေမျက်စိလောက်မှန်းမှ ခါးလောက်ပဲ”
ပုဂ္ဂလိက က ကိုယ့်အရင်းအမြစ်နဲ့ကိုယ် ကျန်မြန်မာ့ ၇၀ %ကို
နူးကလိယ နဲ့ပဲထုတ်ထုတ် ကျောက်မီးသွေး ဓါတ်ငွေ့ အစရှိတာ
နဲ့ပဲထုတ်ထုတ် ထုတ်ရောင်းနိုင်ရင်ရောင်း သုံးနိုင်တဲ့သူ
ခရိုနီတွေဘယ်တုန်းကများကိုယ်အရင်းအမြစ်နဲ့ကိုယ်လုပ်တာမြင်ဖူးလို့လဲ Khant Khant ရယ်။ အစိုးရဟာတွေချည်းယူယူလုပ်နေမင့်ဟာကို။ အခုလဲ သူတို့မဆင်းခင် အစိုးရ အီးပီစီကြီးကိုလွှဲလိုက် ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ အခုကလက်ရှိသူတို့လက်ထဲအာဏာရှိနေတုန်းနော်။ ၂၀၁၅ အာဏာမဲ့သွား ရင် ခုသာခံသာအောင် သားစဉ်မြေးဆက်ကျန်အောင် မလုပ်ဘူးမပြောနိုင်ဘူး။ ဟိုတနေ့က တယောက်ပြောသွားတာ ပတ်တမြားလည်ဆွဲတကုံးကို သိန်း ခုနှစ်ထောင်တန်တာကို ကန်စွန်းရွက်ဝယ်သလိုဝယ်သွားတာတဲ့။ ဒီအကျင့်တွေနဲ့ဆိုရင် ဒီလိုဆက်သုံးနိုင်ဖို့ ဘာမဆိုလုပ်မှာပဲ။ ဘယ်တုန်းကမှပြည်သူ့မျက်နှာမကြည့်ခဲ့တာ အခုနောက်ဆုံးအချိန်ဆိုပိုလို့တောင် မကြည့်တော့ဘူး သေချာတယ်။
post နဲ့မဆိုင်ပေမယ့် comment ထဲမှာ ရေးထားတဲ့ စကားပုံလေးမှားနေလို့ ပြန်ပြင်ချင်ပါတယ်…။ အဲဒီ စကားပုံကို တော်တော်များက “..ရင်လောက်တင်မှ ဒူးလောက်ကျ..” လို့ထင်ထားကြပါတယ်..။ အမှန်က “… ဒူးလောက်တင်မှ ရင်လောက်ကျပါ…”
ဟုတ်ကဲ့ ခုလို အသိ မှားကိုပြင်ပေးလို့
ပိုစ့်ကိုမန့်တော့မယ် သန်း ၆၀ ညံ့တာမဟုတ် လက်တဆုတ်စာညံ့လို့ ကိုယ်ကျိုးကြည့်လို့ ကိုယ်ကျိုးနဲကုန်တာ လို့မြင်မိပါကြောင်း
” သန်း ၆၀ ညံ့တာမဟုတ် လက်တဆုတ်စာညံ့လို့ ကိုယ်ကျိုးကြည့်လို့
မွသဲ ရဲ့ ၊ အမှန်က ၊ သန်း ၆၀ က ညံ့လွန်းလို့သာ ၊
လက်တဆုတ်စာ ရဲ့ လုပ်ချင်တာ လုပ်တာကို ခံနေရတာကိုးဗျ ။
၁ ။ သန်း ၆၀ က ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် ညံ့တယ် မထင်သေးတာ နှင့် ၊
၂ ။ အရိုးစွဲနေတဲ့ ညံ့ချက်တွေကို မ ပြောင်းလဲချင်တာပါဘဲ ။
အောင်မယ်လေး အဘရယ် မညံ့ဘာဘူး မညံ့ဘာဘူး သန်းခြောက်ဆယ်သောသူတွေ မညံ့ဘာဘူး။ မညံ့ညံ့အောင် တုတ်ပြဒါးပြပြ ပညာရေးမပျက်ပျက်အောင်ဖျက်လို့ပျက်သွားကြတာပါ။ အဘတို့ Khant Khant တို့လိုတော်ဘာလျှက်နဲ့ဘာမှလုပ်မရဘဲအားမလိုအားမရဖြစ်နေတဲ့သူတွေအ များကြီးပါ။ မြန်မာတွေမညံ့ခဲ့လို့လဲ ၁၉၉၆ ထိ တော်လှန်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တာပါ။ ဒါပေမဲ့ သိတဲ့အတိုင်း မညံ့ချင်ပဲညံ့လိုက်ရတာပါအဘရယ်။ လူ့ဘ၀နဲ့ သေနတ်နဲ့ယှဉ်ပြီးမညံ့ကြောင်းပြခဲ့ကြတာတွေ သမိုင်းနဲ့အြ့ပည့်ပါ။
မိုးရွာသီမှာမှို ထွက်သလိုပေါ့ဗျာ။အချိန်တန်တော့လဲ တုန်းတဲ့မှို
ကလဲတုန်း။မတုန်းချင်ရင် အနင်းခံပြီး ဇတ်သိမ်းလှမှာမဟုတ်ပါ
ဘူး။ ခုဆို ခရိုနီတွေလဲ အခြေအနေ ကြည့်နေရတဲ့ဘဝ
ရောက်နေပါပြီ။ ပြည်သူတွေ မညံဖို့ပဲလိုတယ်။
ပြည်သူတွေမညံ့ဘူးလို့ထပ်ပြောပရစေ။ ကျွန်မတို့သန်းခြောက်ဆယ်သောပြည်သူတွေမှာ ပညာရှင်တွေ အများကြီးပါ။ သူတို့ကိုသာလူမှန်နေရာမှန်တာဝန်ပေးကြည့်ပါလား ကျွန်မတို့နိုင်ငံမကြာဘူး ဂျပန်ကိုရီးယား တွေကိုကျော်တက်သွားမှာ။ အခုဟာက တကယ်တတ်တဲ့သူတွေ ပညာရှင်တွေကို ချောင်ထိုးပြီး မတတ်တဲ့အစိမ်းဝတ်တွေကအုပ်ချုပ်နေလို့ဖြစ်ရတာ။ ဟိုနေ့က ဆရာမ၀င့်ပြုံးမြင့်ရေးသွားတဲ့ ပညာရေးအကြောင်းဆိုရင် တကယ့်ပညာရှင်အတွေးအခေါ်တွေတွေ့ရမှာပါ။ ပညာရှင်တွေက ပညာရေးကိုဘယ်လိုပြင်ရမလဲ ဆိုတာသိနေတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြင်ဖို့အခွင့်မရဘူး။ အခုချိန်မှာ ဒီလိုပညာရှင်တွေလက်ထဲ ကျွန်မတို့ပညာရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့အပ်လိုက် ချက်ချင်းအပျံစားထွက်လာမယ်။ အဲလိုပဲ နယ်ပယ်အသီးသီးမှာတကယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေကိုခိုင်းဖို့ပဲလို တယ်။ ချောင်ထိုးထားရင်တော့ အခုလိုပဲ သန်းခြောက်ဆယ်ညံ့တယ်လို့ထင်မှာပဲ။ တကယ်တော့ သန်းခြောက်ဆယ်မညံ့ပါဘူး။ နေရာပေးမခံရတာ ပါ။ သူမပေးမှတော့ကိုယ်အတင်းနေရာယူလို့မှမရတာ။
တတ်ကျွမ်းမူ့တမျိုးပဲ။ ပညာတမျိုးပဲ ဆို ရင် မရပါဘူး။
အခြေအနေ အချိန်အခါကို နားလည်နိုင်ရမယ်။ဖိနှိပ်ရင် ရုန်းကန်ထွက်ရဲရမယ်။
ခုပြောသလို ပညာရေးကို ပြင်ရမယ်။ပညာရှင်တွေလက်ခံတယ်။ဆွေးနွေးနေကြတယ်။
ဒါပေမဲ့ သူတသင်း ကိုယ်တသင်း စုဖွဲ့မှု့မျိုးပဲတွေ့ရတယ်။ ပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့က
၁။ လက်ရှိ တန်းမြင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေသိရမယ်။
၂။ အဲဒီကျောင်းသား ကျောင်းသူတွေရဲ့ဆရာတွေသိရမယ်။
၄။ ပညာကိုအသုံးချမယ့် လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အသီးသီးကလူတွေသိရမယ်။
ကျတော်မြင်တာလောက်ပဲ မှာ ဘယ်နှလွှာလောက်ကစိတ်ဝင်စားကြပါသလဲ?
ခုနက ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပညာရှင်တွေ ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ဘယ်ဟာကိုဘယ်
လိုပြင်မယ်။စနစ်ကိုဖြင့်ဘယ်လို လုပ်မယ်။ အစရှိသည်ဖြင့်ပြောနေယုံနဲ့ နားထိုင်း အစိုးရက
သိပါ့မလား။ ထုံပေပေအစိုးရကို ဖိအားပေးဖို့ ဒီပညာရှင်တွေစွမ်းနိုင်ပါ့မလား။ ဒါကအားလုံးပါမှ
အလွှာအသီးသီးက သိမှ သန်း ၆၀ မှာ ၆ သန်း လောက်က အစိုးရကို အော်နိုင်ရင်ကို ရပါတယ်။
ဒါ ပညာရှင်တွေ တော်သော်လည်း လုပ်ပုံလုပ်နည်း ညံလို့ ဆိုရင်ကော???
ကျတော်ရှင်းပြချင်တာ ရူပ်ထွေးသွားရင် ခွင့်လွတ်ပါ။ထပ်ရှင်းပြချင်ပါတယ်။
ရေမြောင်းမှာ အမှိုက်တွေ များနေတော့
ရေစီးရေလာ ဘယ်ကောင်းတော့မလဲဗျာ …
ခြင်တွေ ယင်တွေကလည်း တယ်များလာတော့တာပေါ့ …
ဒါကြောင့် ကျုပ်က ဆရာတင်ပြီး ဆရာအံ လို့ ခေါ်တာပေါ့။
တပည့် စိတ်ကိုသိနေသလိုပဲ ပြောချင်တာနဲ့အတော်ပဲ။
ကျတော်ဒီ ရေဆိုးမြောင်းတွေ အမှိုက်ပုံ ကိစ္စတွေ လမ်းသန့်ရှင်းရေးတွေ
စသည်ဖြင့် စည်ပင်လုပ်ငန်းတချို့ကို ပုဂ္ဂလိက ကို လွဲ စေချင်တာဗျာ။
အစပထမတော့ တက်နိုင်လောက်တဲ့ရပ်ကွက်တွေကိုအရင် လုပ်။နောက်တဖြည်းဖြည်း
အစွန်အဖျားရပ်ကွက်တွေထိ နုံန်းတမျိုးနဲ့လုပ်။ဒါဆို လမ်းတွေ ရပ်ကွက်တွေ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်သွားမယ်။
နောက်လုပ်သားတွေ လစာခံစားခွင့်တွေတိုးလာမယ်။ စည်ပင်ကလည်း
တခြားကိစ္စတွေ စိစစ်တာ အခွန်ကောက်တာတွေမှာ ဖိဖိစီးစီးလုပ်နိုင်မယ်။
ဒါပေမဲ့ ခရိုနီတွေ အမှိုက်ကောက်ချင်ပါ့မလားမသိ
သဂျိုးကို ဆရာ လာတင်ဒဲ့လူဂ ချိဒေး .. ဟေဟေ့ ..
တဘဲ့ ဆိုဒေါ့ဂါ ချရာ ခိုင်းသမျှ လုပ်ပေးရမယ် မီဟုတ်လား ..
တဘဲ့ .. ချရာ့အတွက် မန်းနီး သိန်းတစ်ထောင်လောက် ချာဂဲ့ …
တိုက်သင့်ရင် တိုက်၊ ခိုးသင့်ရင် ခိုးဂဲ့ ..
ဒီမှာ ချရာ မင်ဂါစရိတ် လိုနေရို့ ….. ငိငိ
ဒေါ်လာ လား ရမ်းလား ဝမ်းလား ယွန်းလား ယူရိုလား
မြန်မာနိုင်ငံသား သထေးတော်တော်များများက သထေးလို မနေတတ်
သဌေးက သဌေးလို မနေတတ်
ဒီမှာကျတော်တခုထပ်စဉ်းစားမိတာ တခုက လူလတ်တန်းစား။
နိုင်ငံရေးအရ အောင်မြင်မူ့ဟာ ပြည်သူများစီးပွားရေးအဆင်ပြေ
မြင့်မားလာခြင်းနဲ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ တပြေညီ စီးပွားဥစ္စာတိုးတတ်လာ
ခြင်း နဲ့အတူ လူလတ်တန်းစား အရေအတွက်အချိုးကို မြင့်မားလာစေ
ဘယ်လိုပဲ နိုင်ငံရေးစနစ်ကောင်းမွန်ပါတယ်။အောင်မြင်ပါတယ် ပြောပြော
လူလတ်တန်းစား ဦးရေ အချိုးက လူချမ်းသား နဲ့ လူဆင်းရဲ အချိုး ထက် နိမ့်
ကျနေမယ်ဆိုရင် အောင်မြင်ပါတယ်ပြောလို့မရပါဘူး။ အိမ်နီးချင်း တရုတ်နဲ့
အန္ဒိယ နိုင်ငံများကို ကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ ပညာတတ်များလား မများလားဆိုတာ စာကောင်းပေမွန်လို့ ဆိုနိုင်မဲ့ စာအုပ် တစ်အုပ်ထုတ်လိုက်ရင် ဘယ်နှစ်ယောက် ၀ယ်ဖတ်ကြသလည်း ဆိုတာနဲ့ တင် တော်တော် သိနိုင်နေပြီ ခင်ည။
သဘောတူပါတယ်။ဒါအမှန်ပါပဲ။ မြန်မာပြည်မှာ သန်း၆၀ ရှိတာ
မှာ ဘယ်လောက်စာဖတ်သလဲဆိုတာ စာအုပ်ထုတ်ဝေရေးရဲ့
တချို့စာအုပ်တွေဆို အုပ်ရေ ၅၀၀ တောင်မကုန်တာတွေသိရပါတယ်။
ဒီတော့မြန်မာတွေစာဖတ်အားနည်းတယ်ဆိုတာ ကမ္ဘာ အရပ်ရပ်က
စာအုပ် အုပ်ရေ သန်းချီ တာနဲ့ယှဉ် ပြီးလဲ မြင်နိုင်ပါတယ်။
၃။ တိုင်းပြည်ရေးရာရှုပ်ထွေး ဝေဝါးနေမှု့။
၄။ စာပေအဆင့်အတန်း ဘာသာစကားအရ လူအများဖတ်ရှု့
၅။ အစိုးရ၏စာပေအခန်းကဏ္ဍတွင် ထောက်ကူပါဝင်ခြင်းနည်းပါး
မှာ ဂျပန် ဆိုတာပါနေလို့ ဂျပန်နဲ့ပဲ ပြန် ပြောရမှာပဲ။
ပုသိမ်မှာ မှန်စက်ရုံတည်ဆောက်တုန်းကပေါ့ဗျာ။၁၉၈၂ ဝန်းကျင်
မှာပါခဲ့တယ်။ကျတော်ဖခင်က သချာင်္ တော်တယ်။အဲဒီစက်ရုံက ဂျပန်
အကူအညီနဲ့ ပညာရှင်နဲ့ ဆောက်တာမို့ လုပ်ငန်းပိုင်းမှာဂျပန်အင်ဂျင်နီယာ
တွေနဲ့ထိတွေ့လုပ်ကိုင်ရတယ်။တနေ့ တွက်ချက်မူ့အပိုင်းမှာ ကျတော့်
ဖခင်နဲ့ဂျပန်အင်ဂျင်နီယာ နဲ့ အငြင်းပွားရတယ်။ဂျပန်ကလည်းတော်
ဂျပန် အင်ယာချူပ်ပေါ့ဗျာ။သူ့ဆီမှာအမှားအမှန် ဆုံဖြတ်ဖို့သူတို့
ပြသနာကိုယူသွားတယ်။ အင်ယာချူပ်က တချက်ကြည့်ပြီး ဒါအမှန်ပဲ
ကျတော့်ဖခင်နဲ့အဲဒီဂျပန် အတူတူထမင်းမစားခင် အရက်သောက်စကား
နားမလည်နိုင်ခဲ့ဘူး။ အိမ်အပြန်ကျမှ မေးကြည့်မိတယ်။အဖေတို့
ပညာရှင်တွေက တကမ္ဘာလုံးမှာ ရှိရှိသမျှ ဘာသာအသီးသီးနဲ့စာပေ